भेटियो २ नेपालीमा कोʼरोना भाइʼरस ! रिपोर्ट नै सार्वजनिक भयो सेयʼर गरौ……(भिडिʼयो सहित) « Online Tv Nepal
भेटियो २ नेपालीमा कोʼरोना भाइʼरस ! रिपोर्ट नै सार्वजनिक भयो सेयʼर गरौ……(भिडिʼयो सहित)
Published : 10 March, 2020 11:07 am
यूएईमा २ नेपालीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको भेटिएको छ । सोमबार त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार २ नेपालीसहित १४ जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नयाँ बिरामीहरु फेला परेका हुन् ।
चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले विश्वका १ सय ७ भन्दा बढी मुलुकहरुमा फैलिसकेको छ भने ३ हजार ८ सय ८३ जनाको मृत्यु भैसकेको छ । विश्वभर १ लाख ११ हजार ४ सय ८९ जना सो भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् । भिडियो हेर्नुहोस्….